» न्यु मिडिया:सबैजसो दुर्व्यवहार महिलामाथि
८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०३:३१
काठमाडौं । काठमाडौं स्युचाटार बस्ने कल्पना कार्की (नाम परिवर्तन)लाई फेसबुकमा ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ आयो । तस्बिर हेर्दा भलाद्मी लागेपछि उनले त्यसलाई स्वीकार गरिन् । हाई, हेल्लोमा सुरु भएको च्याटको सामान्य गफगाफ केही महिनापछि कल्पनालाई असहज लाग्न थाल्यो । फेसबुकसाथीले म्यासेन्जरमा गर्ने कुराकानी र त्यसका भाव अनेक अर्थ लाग्ने खालका हुन थाले । यसपछि उनले कुराकानी नै बन्द गरिदिइन् । रिप्लाई नदिँदा पनि निरन्तर म्यासेज आइराखेपछि कल्पनाले फेसबुकको त्यो साथीलाई ‘ब्लक’ (फेसबुकमार्फत सम्पर्क गर्न नसकिने) नै बनाइन् ।
कल्पनाले त समयमा नै ती साथीको मनोभाव बुझिन् र आफ्नो समस्या समाधान गरिन् । तर, सबै महिला उनीजस्तै आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । काठमाडौंकी रमा शाह (नाम परिवर्तन)को फेसबुक प्रोफाइल चिनजानकै केटा साथीले ह्याक गरेर अश्लील फोटो राखिदिए । आफ्नै एकाउन्टमा आफ्नै अनुहार भएको अश्लील फोटो देखेर अत्तालिएकी उनी समस्या समाधानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखाको साइबर सेलमा उजुरी दिन पुगिन् । उजुरीलाई छानबिन गरेर सोलुखुम्बुका युवक पक्राउ गरेर महाशाखाले मुद्दा चलायो ।
यस्तै, फेक आईडी बनाएर त्यसैको आडमा युवतीलाई आफैँ उनीहरूकै अश्लील तस्बिर बनाएर म्यासेजमार्फत पठाउने काठमाडौंका अर्का युवाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । फेक आईडी खोलेर छोराको अपहरण गर्छु भन्दै फेसबुक म्यासेन्जरबाट एक महिलालाई ‘ह्यारास’ गर्ने अर्का युवकका विरुद्धमा पनि मुद्दा चलाइएको महाशाखाको साइबर सेलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक पशुपति राय बताउँछन् ।
साइबर सेलमा न्यु मिडियाको प्रयोग गर्दा हुने अनलाइन ह्यारासमेन्टका यस्ता घटनाका उजुरी दिनहुँ आउने गर्छन् । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै सेलमा ५ सय ६० उजुरी परेका छन् । उजुरी पर्नेमा अधिकांश घटना दुव्र्यवहारका हुने गर्छन् । त्यसबाहेक ठगीका केही घटना हुने सेलका प्रमुख राय बताउँछन् ।
इन्टरनेटको प्रयोगबाट चलाउन सकिने, धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता हुने मिडियालाई नै न्यु मिडिया भनिन्छ । यसले विशेषतः अनलाइन सञ्चारमाध्यम, ब्लग, विभिन्न साइट्स तथा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट एप्स, बी च्याटलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई जनाउँछ । कसैलाई दुःख र हीन महसुस बनाउन गरिने व्यवहारलाई दुव्र्यवहार भनिन्छ । महिलामा खासगरी रूप, रङ, लिङ्गलगायतका आधारमा यस्तो दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोगसँगै न्यु मिडियामा च्याट तथा भिडियोमार्फत पनि महिलालाई दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । अनलाइनमार्फत हुने यस्ता समस्या तथा कार्यलाई दुव्र्यवहारका नयाँ रूप मानिएको छ ।
सूचनाप्रविधिको विकास र बढ्दो प्रयोगले महिलाले दुव्र्यवहारका नयाँ–नयाँ रूपको सामना गर्नु परिरहेको छ । मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले अनेक फाइदासँगै विकृति पनि बढाएको छ । सांस्कृतिक समालोचक डा. अर्चना थापा पहिले–पहिले सिट्ठी बजाएर, सुसेली हालेर, गीतबाट जिस्क्याएर, छोएर गरिने दुव्र्यवहार अहिले फोन, इन्टरनेटलगायतका प्रविधिमा रूपान्तरण भएको बताउँछिन् । पहिलेजस्तो व्यक्तिको अगाडि तथा नजिक पुगेर नै दुव्र्यवहार गरिन्छ भन्ने छैन । कसैको अगाडि नपरी तथा परिचय लुकाएर गरिने दुव्र्यवहारका घटना इन्टरनेटमार्फत हुने गरेको छ ।
धेरैले चलाउने र सजिलै अरूलाई दुव्र्यवहार गर्न सकिने भएकाले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट धेरै महिला दुव्र्यवहारमा परेको साइबर सेलका प्रमुख राय बताउँछन् । सेलले फेसबुकको प्रोफाइल ह्याक गरेर अश्लील फोटो राख्ने, नक्कली आईडी बनाएर युवतीलाई सताउने, गालीबेइज्जती गर्नेलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सेलमा पर्ने उजुरीमध्ये करिब ९० प्रतिशत उजुरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट हुने गरेको उनले बताए । दुव्र्यवहारका ९० प्रतिशत उजुरीमा महिला नै पीडित हुने गरेका छन् । दुव्र्यवहारमा पनि यौनजन्य दुव्र्यवहारका घटनालाई गम्भीर मान्दै मुद्दा चलाइने गरिएको छ ।
सेलले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा परेका हाठ सय ३० उजुरीमा २३ वटामा मुद्दा चलाएको छ । जसमा यौनजन्य दुव्र्यवहारको मुद्दा १७ वटा रहेका छन् । ०७१÷७२ मा ३ सय ९ उजुरी परेकोमा ३१ वटा मुद्दा चलाउँदा दुव्र्यवहारका १८ मुद्दा थिए । ०७०÷७१ का ९८ उजुरीमा १६ वटाको मुद्दा चलाउँदा चारवटा यौनजन्य दुव्र्यवहारका थिए ।
‘पीईडब्लू’ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१४ मा गरेको सर्भेमा अनलाइनको प्रयोग गर्नेमध्ये ४० प्रतिशत ह्यारासमेन्टमा पर्ने गरेको पाइएको छ । सर्भेमा अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारमध्ये धेरैजसो सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको छ । सेन्टरका अनुसार करिब ६६ प्रतिशत दुव्र्यवहार सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको छ । अध्ययनका अनुसार १८ देखि २९ वर्ष समूहका धेरै दुव्र्यवहारमा पर्ने गरेका छन् । अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारमा ५० प्रतिशत महिला नाम बिगारेर जिस्क्याउने, ३६ प्रतिशत नियतवश होच्याउने, २६ प्रतिशत अनलाइनमार्फत पछ्याउने, २५ प्रतिशत यौनजन्य दुव्र्यवहार, २३ प्रतिशतले शारीरिक धम्की र १८ प्रतिशतले निरन्तर दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको तथ्याङ्क सेन्टरको रहेको छ ।
समाजमा जिस्क्याउने, मानहानि गर्ने खालका दुव्र्यवहारलाई सामान्य ठान्ने चलन रहेको मनोविद् डा. गंगा पाठक बताउँछिन् । तर, यस्ता दुव्र्यवहारले मानसिक पीडासमेत हुने गरेको छ । समयमा नै समस्या समाधान नहुँदा गम्भीर खालका मनोरोग पनि निम्त्याउन सक्छ । प्लस टु पढ्दै गरेकी किशोरीको पढाइमा ध्यान केन्द्रित नहुने, एक्लै बस्न रुचाउने भएपछि अभिभावक डा. पाठककोमा परामर्श लिन पुगेका थिए । किशोरीको समस्या केलाउँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तस्बिरमा आएको कमेन्टमा प्रयोग गरिएका शब्दले उनी मानसिक रूपमा प्रभावित भएको उनले पाइन् ।
दुव्र्यवहारमा पर्दा गरेको काम रचनात्मक हुनु त टाढाको कुरा, बारम्बार बिग्रने, समयमा नसक्ने, नतिजामुखी नहुने हुन्छ । काम बिग्रेपछि पाइने अपजसले मनमा सङ्कोच, छटपटी र तनाव हुनु स्वाभाविकै हो । त्यो अवस्थामा धेरैजसोले विकल्प खोज्छन्, त्यो नपाए पलायनको बाटो रोज्ने मनोविद् डा. पाठक बताउँछिन् । यसबाट महिलाको वृत्तिविकास पुरुषको जस्तो सहज हुँदैन । दुव्र्यवहार लुकाउने कोसिस गर्दा थप पीडा हुन सक्ने भएकाले यसविरुद्ध तत्काल आवाज उठाउनुपर्ने पाठकको सुझाव छ ।
दुव्र्यवहार गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत दण्डित गर्न सकिन्छ । यौनजन्य आशयले गरिएको दुव्र्यवहारलाई जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत कारबाही गर्न कानुन पनि छ । जुनसुकै किसिमका दुव्र्यवहारविरुद्ध कारबाहीको कानुनी ग्यारेन्टी भए पनि उजुरी दर भने न्यून छ । महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिकी सदस्य बन्दना राणा ऐन–नियमबारे जानकारी नै नभएका कारण कम उजुरी पर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘विकसित देशहरूमा यस्ता दुव्र्यवहारबारे खुला छलफल र प्रतिकार गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पीडित नै खुलेर आउन सक्दैनन् ।’
(संचारिका फिचर सेवा), साभार : महिला खबर ।
नीजिवनमा ब्यबसायिक फलफुल खेती
छुट प्राप्तिकाे माेहमा महिलाहरुकाे प्रयाेग
तराई र पहाडबीच सद्‍भाव बढाउने पर्व छठ
दवाव र चापमा हेटाैडा अस्पताल
छोरा जन्माउन पटक पटक गर्भपतन
अपाङ्गमैत्री छैन निर्वाचन
हेटौंडा जेसीजको कार्यक्रममा २१ जनाले गरे रक्तदान
२१ औं शताब्दीको अन्त्यमा आइपुग्दा पनि महिलाको सुरक्षा अवस्था नाजुक
नेपालको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या धुमपानबाट प्रभावितः नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था
महालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार २०७७ साहित्यकार डा. लम्साललाई प्रदान गरिने
सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर,तीनबुँदे सहमतिमा के छ ?
पर्यटन विकास आयोजना बागमती प्रदेशका सब इन्जिनियर ५० हजार घुस रकम सहित पक्राउ